Sonkorowga | Diabetes
Waxaad tahey xubin mihiim ah oo daryeelka caafimaadkaaga marka ay timaado maaraynta sonkorowgaaga.
Su'aalo iyo jawaabo caam ah
Sonkorowga ama macaanka ma la kala isku gudbin karaa? Ma ka qaadi karaa qof kale?
Sonkorowga la isuma gudbiyo. Qof kale kama qaadi akrtid ama ma qaadsiin kartiid saaxiib ama qaraabo ama deris.
Waa maxay sababta la iiga helay sonkorow gudaha Maraykanka laakiin aan la iiga helin wadankaygii hooyo? (Waa maxay sababta hadda la iiga helay ee aan hore la iiga helin?)
Waxa laga yaabaa inaad wadankaaga hooyo ku cuni jirtay cunto ka duwan tan aad hadda cuntid.
Waxa laga yaabaa in aanad u firfircoonayn sidii aad ugu firfircoonayd markii aad joogtay wadankaaga hooyo. (Tusaale ahaan, waxa laga yaabaa inaad wax badan lugeyn jirtay wadankaagii hooyo.)
Waxa laga yaabaa in heerkaaga giigsanaanta ama istareesku uu ka duwanaa sida uu yahay markii aad joogtay wadankaagii hooyo?
Sidee baan u sameyn karaa firfircooni/jimicsi xilliga jiilaalka ama qaboobaha marda dibaddu qabowdahay oo baraf leedahay?
Ku soco jaranjarooyinka gudaha dhisme abaarmano ah.
Ku dhex soco gudaha suuqa dukaameysiga ama mool (mall).
Is qor xarun jimicsi sida YMCA/YWCA. Curves waxa loogu talogalay haweenka kaliya. Fasal la bilaw saaxiib.
Is qor fasal jimicsi oo ah internetka (sida yoga ama jimicsiga boodboodka leh) oo aad ku sameyn kartid gurigaaga. (Waxa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad iibsatid ama kiraysatid qalab.
Tijaabi kooxo – jimicsigu wuxu noqon karaa mid leh maaweelo iyo bulsho (kubadda cagta, ciyaaro, iwm.)
La hadal barnaamijyada jimicsiga iyo goobaha isboortiga si aad u ogaatid haddii ay bixin karaan wakhtigyo u gaar ah dumarka iyo hablaha oo ay u jimicsan karaan si ka gooni ah ragga iyo wiilasha.
English: Diabetes overview
Sonkorow/macaan waa cudur nolosha oo dhan haya qofka oo aan la daweyn karin, laakiin waa la xadeyn karaa. Marka aad sonkorow macnaheedu waxa weeye jidhkaaga ayaa dhibaato ka haysaataa sidii uu u isticmaali laha tamarta ka timaada cuntooyinka aad cuntid. Tamartaasi waxay ka timaadaa dhamaan cuntooyinka ay ku jiraa karbohaydaraytka (daqiiqlayda iyo sonkoraha), borootiinta iyo dufanka. Ka dib marka aad cunto cuntid, wax cuntada loo beddelaa gulukoos taasoo ay unugyadaadu u isticmaalaan shidaal ahaan.
Waxa muhiim ah in aad xusuusnaatid in karbohaydraytku ay saameynta ugu weyn ku leeyihiin heerarka gulukoosta. Marka aad qabtid sonkorow, jidhkaaga waxa dhibaato ka haysataa sidii gulukoosta looga wareejin lahaa dhiiggaaga ee lagu wareejin lahaa unugyadaada. Taasi waxay sababaysa in heerka gulukoosta ku jirta dhiiggaaga ay sare u kacdo.
Gulukoosta dhiiggaaga oo aad ka dhigtid heer caadi ah intii suurogal ah waxay kaa gargaari kartaa in aad dareenti wacnaan iyo inaad heshid tamar dheeraad ah. Xadeynta fiicani waxay kale oo ay kaa gargaari kartaa in aad ka baxsatid dhibaatooyin ku dhaca indhahaaga, wadnahaaga, kelyahaaga, dareemeyaasha iyo xididada dhiigga.
La Noolaanshaha Sonkorowga
Sida cudurka sonkorowgu u saameeyo jidhkaaga
English: How diabetes affects your body
Waxa jira dhawr nooc oo ah cudurka sonkorowga; nooca 1, nooca 2 iyo sonkowoga wakhtiga uurka ayaa ah saddexda nooc ee ugu caamsan.
Haddii aad qabtid sonkorowga nooca 1, ganacaagu (pancreas) waxa uu sameeyaa insulin aad u yar ama mab sameeyo. Jidhkaagu waxa uu u baahan yahay insulin si gulukoosta looga saaro dhiiggaaga oo loogu wareejiyo unugyadaada si ay tamar uga dhigtaan.
Haddii aad qabtid sonkorowga nooca 2, qanacaagu waxa uu wali soo saaraa insulin, laakiin jidhkaagu um isticmaalo sidii la rabay inuu u isticmaalo.. Waxa tan la yidhaahdaa iska-caabin insulin.
Haddii aad qabtid sonkorowga uurka (gestational diabetes), ganacaagu ma soo saaro insulinta dheeraadka ah ee loo baahan yahay xilliga uurka.
Marka aan insulintu si sax ah ugu shaqeynaynin jidhkaaga,waxa dhacaysa in gulukoosta ka timaada cunta aad cuntiday ku nagaato dhiiggaaga. Halka gulukoostu u wareegilahayd unugyadaada, waxay ku ururtaa dhiiggaaga. Waxalaga yaabaa in aad yeelatid astaamaha soo socda:
haraad soo kordhay
kaadi tiro badan
tamar intii hore ka yar
miisaan lumid aan sababtiisa la garanayn
aragga indhaha oo isku darsan
cudurka khamiirka (yeast) oo tiro badan
nabaro aan bogsanayn
Sida insulintu u shaqeyso
English: How insulin works
Insulintu waxay u shaqeysaa sida fure oo kale, iyada oofuraysa unugyada jidhka si gulukoostu u gasho unugga siay ugu noqoto il tamar laga helo. Insulin waxay la mid tahayfuraha baabuurka. Baabuurku waxa uu u baahan yahayshidaal si uu u shaqeeyo, laakiin furaha baabuurka ayaabixiya dhinbiisha sii daysa shidaalka. Gudaha jidhkaaga,insulinta waxa loo isticmaala in ‘dhinbiil’ looga dhigoisticmaalka gulukoosta si ay unugyadaadu shidaal ugadhigtaan.
Source: Allina Health's Patient Education Department, La Noolaanshaha Sonkorowga, dia-somali-ah-23909 (For an English version, see Living with Diabetes, dia-ah-23911.)
Last Reviewed: 09/15/2016